We.com.mm - Nicki Minaj ရဲ့ အဆန်းတကြယ်ဝတ်စုံ (၁၀) စုံ
Nicki Minaj ရဲ့ အဆန်းတကြယ်ဝတ်စုံ (၁၀) စုံ
Nicki Minaj လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာကိုအရင်စပြီးမြင်ကြလဲ။
သူမဟာ အရမ်းတော်တဲ့ မိန်းကလေးRap အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ဦးဆိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ Fashion တိုင်းဘယ်လို Trend ဖြစ်လဲဆိုတာ ပွဲတိုင်းသိမှာပါ။ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး အသွင်တခုပြီးတစ်ခု ထွင်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ အကြံတွေကိုလည်း မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ပါဘူး။ ဆံပင်ဆိုလည်း ဆံပင်၊ အကျီ ဆိုလည်း နေရာနဲ့အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီး ပုံဖော်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ အဆန်းတကြယ်ဝတ်စုံတချို့ကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
(၁) MTV Video Music Awards ပွဲမှာမြင်ရတဲ့ Nicki Minaj
ဒါကတော့ ၂၀၁၁ တုန်းက MTV VMA ပွဲတုန်းက ဝတ်စုံပေါ့နော်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကာတွန်းကို Inspire ယူပြီး ချုပ်လုပ်ထားတယ်လု့ိသိရပါတယ်။ တီထွင်ချုပ်လုပ်မှုဟာ တကယ့်အံ့မခန်းပါပဲနော်။
(၂) ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အချစ်ကို ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ Nicki Minaj
ဒီဝတ်စုံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ Narita အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုနှစ်ကတော့ မတ်လ ၂၀ရက်နေ့ ၂၀၁၂ တုန်းကပါ။
(၃) ဆံပင်အသွင်အသစ်နဲ့ Nicki Minaj
ပန်းရောင်ဆံပင်လေးနဲ့ 80’s ခေတ်ဘက်ကိုရောက်သွားသလိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီပုံကတော့ ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ တုန်းက သူမတည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ ထွက်လာတဲ့ ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) သက်တန့်လေးနဲ့ Nicki Minaj
၂၀၁၁ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တုန်းက ကယ်လဖိုးနီးယားမှာ ကျင်းပတဲ့ "I'm Still Music Tour" မှာ ဖျော်ဖြေပေးသွားတဲ့ သူမရဲ့ အဆန်းတကြယ် သက်တန့်ပုံစံဝတ်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Luxy မှာတွေ့ရတဲ့ Nicki
Luxy Nightclub မှာ Super Bass သီချင်းနဲ့ဖျော်ဖြေပေးသွားတဲ့ ၂၀၁၁ တုန်းက သူမရဲ့Fashion ပါ။ Jacket၊ အဝါရောင် တီးရှပ် လေးနဲ့ လန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ဝတ်စုံဟာ တကယ်မိုက်တယ်နော်။
(၆) Grammy ရဲ့ Red Carpet မှာလျနေတဲ့ Nicki Minaj
ဒီဝတ်စုံကတော့ ၅၄ ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Nicki ရဲ့ အလန်းစား Fashion ပါ။ ၂၀၁၂ တုန်းကပါ။ အနီရောင်လေးနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းဂုဏ်ကိုဆောင်နေတဲ့ Nicki ဟာ တကယ်ကို လှပါတယ်။
(၇) ခြ င်္သေ့အလား Nicki Minaj
ဒီဝတ်စုံကကျတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၅၃ ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲတုန်းက ပွဲတက်ထားတဲ့ Fashion ပါ။ ခြ င်္သေ့အလားဆိုတော့ သူဟာ အားလုံးထဲမှာ ဘုရင်မကြီးတစ်ပါးလို Confident ရှိတယ်ပေါ့နော်။
(၈) ဘာဘီရုပ်လေးလို Nicki Minaj
ဘာဘီ နစ်ကီ လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ ဒီဝတ်စုံကိုကျတော့ ၂၀၁၁ American Music Awards ပွဲတုန်းက တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ဝတ်စုံတစ်စုံပါ။
(၉) အင်္ဂါဂြိုလ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ Nicki Minaj
LA ရဲ့ Dick Clark's New Year's Rockin' Eve ပါတီ ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အဆန်းတကြယ် ဝတ်စုံတွေထဲက တစ်စုံပါ။ နှစ်သစ်မှာ ဂြိုလ်အသစ်မှာပဲ အခြေချတော့မယ့် စတိုင်လ်နဲ့ လန်းနေတဲ့ Nicki လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။
(၁၀) ၂၀၁၀ AMA တုန်းက Nicki Minaj
၂၀၁၀ American Music Awards ပွဲတုန်းကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဝတ်စုံပါ။ ဒီဝတ်စုံရဲ့ ဒီဇိုင်နာကတော့ အိန္ဒိယလူမျိုး Manish Arora လို့သိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ
ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေးလေးကနေ ကပ္ပတိန်အမေရိကမင်းသားရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်လာတဲ့ Dodger
??? အလန်းစား သင်္ကြန် Fashion - By Wai Min Kyaw Oo???
Hello Kitty လေးကိုချစ်တဲ့ Katy Perry
ဓာတ်ဖမ်းမရလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို စိတ်ကောက်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု